Mini Dolls Dolls 100cm ilaa 120cm Collection Micro Tiny Love Doll
Qiimo jaban oo tayo sare leh oo 100cm dhalinyaro ah oo jinsi ah oo caruusad ah iib ah
Dad aad iyo aad u tiro badan ayaa raadinaya mini 100cm caruusado. Kuwani yar yar mini caruusad jinsi kuu oggolaan maayo oo keliya inaad si fudud ugu dhaqaaqdid, laakiin sidoo kale waxay fududeyneysaa inaad ururiso oo aad ilaaliso arrimahaaga gaarka ah. Waxay ku qancin karaan dhammaan baahiyahaaga shucuureed. Oo kuu keena nolosha galmada aad ku riyootid. Waxay noqon karaan qoyskaaga, sida gabadhaada ama walaashaa. Waxay noqon karaan door kasta inta aad jeceshahay. Ma waxaad raadineysaa jilicsan yar, jilicsan oo jilicsan oo jinsi ah? Dhererka dhabta dhabta ah ee caruusadda jinsiga halkan waxay ku jirtaa inta u dhexeysa 100 cm ilaa 120 cm qiimahana waa mid jaban. Dhamaan caruusadaha jinsiga ah ee jaban waa kuwo cusub. Haddii miisaaniyaddaadu aysan badnayn, markaa tani waxay noqon doontaa xulashadaada ugu fiican.
The 100cm caruusadda galmada ee silikoonku waxay noqon kartaa qalab siigaysan oo raaxo leh oo bixiya khibrad ka macquulsan tan masturbay kale. Iyada oo leh caruusado badan oo jinsi ah oo suuqa yaala, waxaad ka heli kartaa anime yar yar oo jinsi ah oo u adeegso si aad ugu dhiirrigeliso madadaalo dheeraad ah inta lagu jiro galmada.
Selina - Gabdhaha Caweyska bushimaha Madoow Tartanka xiisaha Raadinta Wada-hawlgalayaasha TPE Galmada Doll
Rosalind - bushimaha jilicsan ee Dhiigga Cad White Long Curly Hair Timo Gabadh fudud si ay u qariyaan TPE Doll Doll
Windsor - Gabar Cowboy Indhaha Madow Indhaha Sexy Beauty Nus dherer Alaabta TPE Sex Doll
Elvira - Alaabada Dadka Waaweyn Dhererka Nus-Torso Toy Toy Waxyaabaha Fudud ee Lagu keydiyo Doll TPE Jinsi
Elton - Xubin Taranka Guska Weyn Jabbaan Jaahil Ah Doll Doll
Lazuli - Dollhouse 168 Kartoon EVO Version 145CM TPE Doll Doll
Ibta Penelope Sare Sare Raglan Yar Dhexda F koob 148cm Adult TPE Doll
148CM Antonia Simon Naaso Weyn EVO Version TPE Doll Doll
Risako - Jidh Jidh Dhab Ah Naasaha Siilka Dabada Laba Dalool TPE Jinsi Doll
Rosa - Bbsy Boobs Siilka Siilka Futada Laheli Karo Qeyb Jirka TPE Jinsi Doll
Maqaarka Madoow ee Sawirka yar yar ee Cherry Harry 148CM TPE Doll Gabar weyn
Gabar yar oo Shiine ah oo la yiraahdo XiaoQian oo wehelka laabta ah oo wehel 146CM dolic doll
Clement - Naag La Qaadan Karo Oo Cayil Busty Big Ass BBW Sex Doll
Iibso 100cm illaa 120cm fucking mini yar yar oo jinsi ah oo jilicsan oo ku yaal Urdolls
Waad ka iibsan kartaa caruusadda ku habboon galmada dhallaanka hab-nololeedkaaga duruufo aad u macquul ah. Intaa waxaa dheer, tani waa mid mudan in la maalgashado! caruusadaha galmada dhallinta dhabta ahi kuma koobna xidhiidhada shucuureed ee dadka. Lammaanahaaga muddada-dheer wuxuu joogi karaa magaalooyin kale, gobollo, ama xitaa dalal kale. La noolaanshaha lammaanaha waxay noqon kartaa cidlo iyo qanacsanaan la'aan. Fursad umahelaysid inaad ku caajiso boombalahaaga jinsiga ah ee yar yar maxaa yeelay waxaad u baahan tahay inaad sahamiso waxyaabo badan. Kuwa aan khibrad u lahayn, 100cm tl doll doll waa nooc ka mid ah waxyaabaha galmada lagu ciyaaro ee umuuqda aadanaha. Tiknoolajiyada anime ee loo yaqaan 'doll doll anime' ayaa noqotay mid aad u horumarsan, oo leh fursado badan oo loogu talagalay qof walba iyo miisaaniyadaha oo dhan.
Waxaa laga yaabaa inaad ogtahay in caruusada galmada ee 100cm yar ay xiiso leedahay goor hore ama fasax. Caruusadaha jacaylka yar yar ee loo yaqaan 'Lifelike mini love doll' ma ahan waxyaabaha dadka loo tuuri karo, si qarsoodi ahna looma tuuri karo sannadaha 1-2. Sababtoo ah xaqiiqadooda cajiibka ah, waxaa badanaa loo adeegsadaa moodello sawirro iyo xitaa tusaale ahaan. Horumarinta joogtada ah ee caruusadaha caruusadaha dhabta ah ee dhabta ah waxay gacan ka geysan doontaa in wax laga beddelo aragtida dadweynaha. Markay kartidu noqoto mid macquul ah, aragtida dadweynaha ee iyaga ayaa is beddeli doonta. Kuwaan tayo sare leh ee 100cm jinsi jinsi ah waxaa lagu sameeyay heerar jibbaaran oo tayo japanis ah waana kuwo waara oo ku filan si ay isaga caabiyaan khiyaaligaaga duurjoogta ah.